Zamte ရဲ. ဆောင်းပါးမှ တန်ဖိုးမဖြတ် နိုင်သော သမိုင်းကျန်မည့် ဦးနေ၀င်း နှင့် ရတနာနတ်မယ် တို့ မင်္ဂလာပွဲ ပါ သတင်းစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » Zamte ရဲ. ဆောင်းပါးမှ တန်ဖိုးမဖြတ် နိုင်သော သမိုင်းကျန်မည့် ဦးနေ၀င်း နှင့် ရတနာနတ်မယ် တို့ မင်္ဂလာပွဲ ပါ သတင်းစာ
Zamte ရဲ. ဆောင်းပါးမှ တန်ဖိုးမဖြတ် နိုင်သော သမိုင်းကျန်မည့် ဦးနေ၀င်း နှင့် ရတနာနတ်မယ် တို့ မင်္ဂလာပွဲ ပါ သတင်းစာ
Posted by Bayote on Jun 4, 2010 in Myanma News, News | 20 comments
အဲဒါက မြန့်မာ့သမိုင်းရဲ့ အမဲကွက်ကြီးပါဗျာ။
အခုမှ သိတယ် ဗျာ
ဒီဂျူးကပြားထောက်လှမ်းရေးမိန်းမက ဦးနေဝင်းနဲ့ ကွဲကြပြဲကြတော့ ရတနာသေတ္တာတော်တော်များများ အပါယူသွားခဲ့တာနော်။တချိန်က လောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ မြင်းပွဲမှာ ဦးနေဝင်းရှုံးခဲ့ဖူးလို့ လား။တော်တော်လေးကို စိတ်ပျက်စရာကြီးနော်။
ဒါတွေအားလုံးဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းတွေထဲက တစ်ခုပေါ့…
ကောင်းတာ ဆိုးတာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီး သင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့ ဒါတွေကို ဖျောက်ပစ်လို့မရပါဘူး…
ဒါပေမယ့် သတင်းစာရဲ့ နေ့စွဲပါတဲ့ပုံလေးပါ တင်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်
လူမျိုးခြားသွေးနှောတိုင်း ဂျူးလို့ပြောတတ်တာ ပြင်သင့်ပါပြီ။ ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့မြစ်တော်ဖြစ်ပြီး အဖေက သြစတြေလျနိုင်ငံသား အင်္ဂလိပ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Peacemaker ရေ တမျိုးမထင်ပါနဲ့ ။ရတနာ နတ်မယ်က သူလျှိုလုပ်ငန်းကို လုပ်သွားတဲ့သဘောလို့ ပြောကြပါတယ်။ဒီကိစ္စကို ဦနေဝင်းသိတော့ ဒေါသထွက်ပြီး ဆေးလိပ်ပြာခွက်နဲ့ ကောက်ပေါက်လိုက်တာ ရတနာနတ်မယ်သွေးထွက်သံယိုဖြစ်သွားပါသေးတယ်။
ဗဟုသုတ ရပါတယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးပဲ.. အမဲရောင်ဆိုးထားသော သမိုင်းစာမျက်နှာတွေထဲက မှတ်တမ်းတစ်ခု ပေါ့။
ရာဇဝင်ထဲမှာ နေ့ကို ထားရစ်ခဲ့………
“သမိုင်းကိုဘာကြောင့်သင် တာလဲဆိုတော့ မအ အောင်လို့တဲ့”ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောခဲ့တယ်
ရတနာနတ်မယ် ပုံတွေ လေဆိပ်ထဲက စာအုပ်ဆိုင် တဆိုင်မှာ မြင်ဖူးတယ်။ တော်တော် လှတယ်။
Anyone know about her ending ?
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀လလောက်က MG မှာဘဲ ရတနာနတ်မယ် နဲ့ အင်တာဗျူး ဖတ်ရတယ်၊အခုသက်ရှိထင်ရှားလို့ထင်ပါတယ်။
I heard still living in Italy know. but i am not sure.
ရတနာနတ်မယ်အကြောင်းသိချင်ယင် https://sites.google.com/site/myanmarsite1/home/ya/yadanarnatmae ဒီဆိုက်ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ် .ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ပါ ..ဒါပေမဲ့ ကျော်ကြည့်မှရမယ်ထင်ပါတယ်
ကျနော်တို့ ခေတ်မှာသတင်းစာများနှင့် အသံလွင့်ဌာနမှသတင်းများကိုမည်သူမျှမယုံကြပါ၊ ထို့ ကြောင့် ရန်ကုန်ဆင်းရင်အမြဲတန်း “မြေအောက်သတင်း” လေးတွေစုဆောင်းပြီး၊ နယ်ပြန်ရင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ shareလေ့ရှိသည်၊အဲဒီသတင်းများကိုလူတွေက အထူးစိတ်ဝင်စားပြီးယုံကြည်ကြပါသည်။
အထက်အလွှာမှ ခိုင်လုံသောမြေအောက်သတင်း တပုဒ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုအချိန်ရဲ့အဆိုအရ၊၎င်း lady တွင်မင်းမျိုးမင်းနွယ်စီမှ treasure map တချပ်ရှိသည်၊ မဆလခေတ်၏ လ၀ကဥပဒေအရဆိုရင်နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်ခွါသွားပြီးသောလူသည် ဗမာပြည်သို့ ပြန်လာနေထိုင်ခွင့်မပြု၊ အလွန်ဆုံး၇ရက်သာလာလှည်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့ ကြောင့် treasure တွေကိုရှာရန် ၇ရက်တည်းနှင့် ဘယ်နည်းနှင့်မျှ မဖြစ်နိုင်သည်ကိုစိတ်ညှစ်နေသည်။
ဒီအကြောင်းကိုသိသည့် CIA က၎င်းတို့ ကို အလုပ်လုပ်ပေးမည်ဆိုရင်သူမကို ဗမာပြည်သို့ ပြန်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးမည်ဟုနှစ်ဦးသဘောတူခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်ရှုမောင်ဘိလပ်မှအပြန် ဆွစ်ဇာလန်ကိုဝင်၍ တထောက်နားပြီးသူ၏ black money account လတ်တလောမည်မျှတိုးပွားခဲ့သည်ကို စစ်ဆေးလေ့ရှိသည်၊ CIA စီစဉ်ထားသော banquet တခုမှာနှာ ဘူးကြီးနှင့်နတ်သမီးကိုမမျှော်လင့်ဘဲ ၎င်းတို့ တွေ့ စေသည်။
နှာဘူးကြီးသည် ဘာဖြစ်ခြင်ဖြစ်မောင်ဘချစ်ဆိုပြီး နတ်သမီးကိုပင့်ဆောင်ပြီး ဗမာပြည်ကြီးသို့ ပြန်လာကာ၊ လ၀ကဥပဒေကိုပြင်၍၊ တတိယမယားကို ခတ်တအနားယူခိုင်းပြီး၊ပင့်ဆောင်လာသော နတ်သမီးအားစတုထ္ထမယားအဖြစ်ဖြင့် သင်မြောက်လိုက်ပါသည်၊( ၎င်းလ၀ကဥပဒေပြင်လိုက်ခြင်းကြောင့်ေ ဒ်ါစုလည်းအကျုံးဝင်၍ ဗမာပြည်ပြန်ရောက်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်)။
နတ်သမီးသည် သူမ၏ဗိုလ်သွေးလေးပုံသုံပုံးပါသောသား (really very handsome ဒေါ်စုရဲ့ သားနဲ့ စာရင် )နှစ်ယောက်နှင့်မကြာခဏမန္တလေးသို့လာကြသည်၊ ကျနော်မန္တလေးမြောက်ပြင်မှာ သူတို့ မိသားစုကိုမြင်ဘူးသည် (နတ်သမီးသည် တကယ်ချောမောလှပသည်၊ ဗိုလ်ရှုမောင်ကိုကိုလ်ချင်းစာပါသည်)
ဗိုလ်ရှုမောင်သည် နတ်သမီးကိုပင့်၍ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်နိုင်ငံသို့ပျားရည်ဆန်းခရီးထွက်ခဲ့ရာခရီးမှအပြန် ၊ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်တွေက ၊နှာဘူးကြီးကိုဘေးဖက်သို့အသာလေးဆွဲခေါ်ပြီး “ ခင်ဗျားကြီးရဲ့ မယားချောလေးဟာ အမေရီကန်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ သမား၏ သူလျှိုဖြစ်သည်။ သူမသည်အဝေးဆွဲကင်မရာနှင့် ကျနော်တို့ ရဲစစ်စခန်းများကိုဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်။ သူမ၏ဆံထုံးထဲတွင် telex ထုပ်ထားပြီး၊ ရင်ထိုးသည် micro-mic ဖြစ်သည် ” ပြီးနောက်ေ ဆွမျိုးပေါက်ဖော်သည် ကင်မရာကိုသိမ်း၍ ဖလင်များကိုအကုန်ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ဟူသတည်း။
ဗမာပြည်ပြန်ရောက်တော့နှာ ဘူးကြီးသည်ရှက်လည်းရှက်ကြောက်လည်းကြောက် ၊ဒေါသတွေဖြစ်ပြီး နတ်သမီးကိုကော်ဖီပန်းကန်လား ၊ဆေးလိပ်ပြာခွက်လားမသိဘူး (သေခြာမမှတ်မိတော့ပါ)နှင့်ပေါက်ထည့်လိုက်သည်၊ နတ်သမီးလည်းစိတ်ဆိုးပြီး၊သူမ၏ terget အောင်မြင်ပြီးတလောက်ဖြစ်သောကြောင့်ေ သတ္တာ၁၃လုံးကိုဆွဲကာ၊ သားများကိုခေါ်၍လေယာဉ် charter ဖြင့်ဗမာပြည်ကြီးမှ ထွက်ခွါသွားလေသတည်း ။နှာဘူးခေါင်းဆောင်ကြီးသည် မယားလည်းရှုံးသားလည်းဆုံးပေါ့ဗျာ၊ တိုင်းပြည်အတွက်တော့???
ဗိုလ်ရှုမောင်သည်နောက်ဆုံးတော့ တတိယမယားကိုပဉ္စမမယားအဖြစ်ဖြင့်ပြန်လည် တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်၊ သူမနှင့်ပါတ်သက်သောသူများ၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်များအားလုံးကိုရာထူးကြီးကြီးတိုးစေ~~ ~~၏။ဤကဲ့သို့ သောခေါင်ဆောင်၊အပေါင်းအပါ ၊နောက်လိုက်များဗမာပြည်ကြီးမှာ တည်ရှိခြင်းသည်ပြည် မပျက်ဘဲခံနိုင်ပါ့မလား???????
လက်ရှိနိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်တွင်ရှိသေးသော ၎င်းလူမိူက်အုပ်စုဝင်တွေ၊ ဒီလိုမျိုးမဟုတ်တယုတ်လုပ်ခဲ့တာကို မရှက်ဘူးလား??????????
ဆွေမျိူးပေါက်ဖေါ်နိုင်ငံသည်ဗိုလ်ရှုမောင်ကဲ့သို အာဏာရှင်စံနစ်ဖြစ်သည့်အလျောက် ၎င်းတို့ သည်ပြည်သူတွေ၏ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် အားမသန်သော်လည်း၊မကောင်းမှု၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများ လုပ်ဆောင်သော စစ်ထောက်လှန်းရေးများကို တည်ထောင်ဖွဲ့ စည်းရာမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံး one of the best on the world ဖြစ်အောင် အာဏာကုန်ငွေကြေးကုန်ခံပြီးဖွဲ့ စည်းထားသည်၊ အကောင်းဆုံးနည်းပညာများပိုင်ဆိုင်ထားသည်၊
ထို့ ကြောင့်ကတုံးပေါ်ထိတ်ကွက်လို့ မရပါ။
ရတနာနတ်မယ်သည် ဦးနေဝင်း၏ တတိယ အိမ်ထောင်ဘက် ဖြစ်သည်။ ရတနာနတ်မယ်သည် သြစတြေးလျ နိုင်ငံသား အင်္ဂလိပ် လူမျိုး ပြင်ဦးလွင်၊ မြင်းပြိုင်ကွင်း မြင်းဒိုင်ချုပ် ဘွက်ကီ မြင်းပွဲဒိုင် Mr Herbert Bellamy နှင့် လင်းပင်ထိပ်တင်မလတ်၏ သမီးဖြစ်သည်။ ၁၉၃၁-ခုနှစ်တွင် ရတနာနတ်မယ်ကို မွေးဖွားခဲ့၍ အဖိုးအဖွား ဖြစ်သော လင်းပင်မင်းသားကြီးနှင့် ရေနံသာခင်ခင်ကြီးတို့က အသက်ကြီးမှ ကလေးရသောကြောင့် နတ်ကပေးသော ကလေးဟုဆိုကာ လင်းပင်ထိပ်တင်မလတ်၏ သမီးကို ရတနာနတ်မယ်ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ ကနောင်မင်းသား၏ မြစ်တော် တယောက် ဖြစ်သည်။
လင်းပင် မင်းသားကြီး၏ သမီးတော် ထိပ်တင် မလတ်က အသက် ၃၄ နှစ်မှာ သူမထက် ၁၆ နှစ် ကြီးတဲ့ သြစတြေးလျ နိုင်ငံသား အင်္ဂလိပ် လူမျိုး ဘွက်ကီ မြင်းပွဲဒိုင် Mr Herbert Bellamy နဲ့ လက်ထပ်တယ်။ လေးနှစ်ကြာမှ သူမကို မွေးသည်။ သူမ ကိုယ်တိုင်ကတော့ အသက် ၂၂ နှစ်မှာ ပထမ အိမ်ထောင် ဖြစ်တဲ့ အီတာလျံ လူမျိုး၊ WHO က ဗမာပြည်မှာ တာဝန်ကျတဲ့ ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ လက်ထပ်သည်၊ သားလေး ၂ယောက် ရသည်။
ထို့ကြောင့် ပြင်သစ်ဖခင်နှင့် မြန်မာမိခင်တို့၏ သမီး Bollywood ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်သူ Helen Jairag Richardson Khan ၊ အဘိုးဖြစ်သူမှာ မြန်မာဖြစ်ပြီး British ရုပ်မြင်သံကြား သရုပ်အဖြစ် ထင်ရှားသူ Richard Arthur Beckinsale ၊ Richard Beckinsale ၏ သမီးများ ဖြစ်သူ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Kathryn Bailey “Kate” Beckinsale နှင့် ရုပ်မြင်သံကြား သရုပ်ဆောင် Samantha Jane Beckinsale ၊ မြန်မာဖခင်နှင့် အင်္ဂလိပ်မိခင်တို့၏ သမီး Annabella Lwin ခေါ် မြင့်မြင့်အေး ၊ Alternative Musician ဖြစ်သူ Sam Duckworth တို့လိုပဲ ရတနာနတ်မယ် ကလဲ Anglo-Burmese အနွယ်ဝင်များအနက် ထင်ရှားပါသည်။
အီတလီ၏ နာမည်ကျော် Tuscany ပြည်နယ် မြို့တော် ဖြစ်သောFlorence မှာ နေထိုင်သည့် Ms June Rose Bellamy (ခေါ်) ရတနာနတ်မယ် သည် Associazione Culturale ArteeGastronomia Orientale ဆိုင် ဖွင့်ထားပါသည်။
ဖလောရန့် မြို့မှာ Studio June Bellamy ဆိုသော Cooking School ဖွင့်ထားပါသည်။ သူမဟာလည်း ကျော်ကြားသည့် Chef တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ သူမရဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်လေးမှာ မြန်မာအငွေ့အသက်လေးတွေ မြင်နိုင်ပါသေးသည်။ သူမရဲ့ ဒီအခန်းလေးထဲမှာ သူ့ဖခင် ဝါသနာပါတဲ့ မြင်းပုံတွေကို အမှတ်တရ ရေးဆွဲထားသလို သူ့အဘိုး လင်းပင်မင်းသားကြီးနဲ့ ရေနံ့သာ ခင်ခင်ကြီးတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ ပုံကိုလည်း ရေးဆွဲထားတယ်လို့ သိရသည်။
ဦးနေဝင်း နဲ့ ရက် ၁ဝဝ
လူတိုင်းလို ကြားဖူးခဲ့တဲ့ အနောက်နိုင်ငံရဲ့ စပိုင်လုပ်လို့ ဦးနေဝင်းက မောင်းထုတ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ကောလာဟလကို မေးတော့ သူမက ရယ်နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမကို ဦးနေဝင်းက ဆေးလိပ်ပြာခွက်နဲ့ ပစ်ပေါက်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ မနှစ်မြို့စရာ ဖြစ်ရပ်ကိုတော့ သူမက နာနာကျင်ကျင် ဝန်ခံပါတယ်။ နောက်တနေ့ ချက်ခြင်းပဲ သူမဟာ စင်းလုံးလေယာဉ် တစင်း နဲ့ မြန်မာပြည်က ထွက်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်။ လက်ထပ်အပြီး ၅ လ ဆိုတဲ့ အချိန်တိုလေး အတွင်းမှာပဲ လျင်လျင် မြန်မြန် ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့ အဲဒီ အကြောင်းတွေကို သူမက Sin of Pride လို့ ဆိုခဲ့ပြီး သူမကို မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ လူတွေအတွက် ဘာမှ မဆောင်ရွက်နိုင်ဘဲ အရှုံးနဲ့ သက်သက် ထွက်ခွာခဲ့ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြန်ပြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့တယ်။ ၅ လတာ ကြုံဆုံ ခဲ့ရတဲ့ ဦးနေဝင်းကိုတော့ တကယ့် ဉာဏ်နီ ဉာဏ်နက်နဲ့ အရာရာကို ကြိုးကိုင် ခြယ်လှယ်နိုင်သူကြီး တယောက် လို့သာ မှတ်ချက် ပြုထားတယ်။
မကြာသေးခင် နှစ်တွေကတော့ သူမရဲ့ အသက်အစိတ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ မြေးလေးနဲ့အတူ မြန်မာပြည်ကို ပြန် အလည် ရောက်ခဲ့သေးတယ်လို့ ဆိုတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းက ဆရာဝန်တွေနဲ့ လူမူရေးလုပ်ငန်း တချို့ တွဲဖက် လုပ်ကိုင်နေသလို နာဂစ် မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းမှာလည်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အကြောင်း သိရသည်။
အဲဒီခေတ်က နိုင်ငံရေးသမားတွေလာပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ဦးနေဝင်းကိုနားချဖို့ရတနာနတ်မယ်ဆီက အကူအညီ လာတောင်းကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ချည်းပဲ အားကိုးနေလို့ စိတ်ပျက်ရတယ်လို့ ရတနာနတ်မယ်က ပြန်ပြောပြတာ ဖတ်ဖူးတယ်။
ဒီအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ wikileak ရှိရင်သိပ်ကောင်းမှာ။